[ Jan 24, 2017 ] वाग्मती नदी व्यवस्थापन अभियान : १,४६५ अतिक्रमणकारी हटाउनेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्नेसम्म
नदीको किनारबाट सभ्यताको विकास भएको मानिन्छ । मिश्रको सभ्यता नाइलनदी, सिन्धुभाषीको सिन्धुनदीको किनारमा आआफ्नो सभ्यता विकास भएको जस्तै नेपालको सभ्यता पनि वाग्मती नदीको किनारबाट भएको मानिन्छ । त्यसैले वाग्मतीसँग मानव सभ्यता पनि जोडिएको छ । स्वयम्भू…
[ Jan 24, 2017 ] कहाँ छन् लोकमानसिंह कार्की ?
काठमाडौं l एउटा समय थियो, लोकमानसिंह कार्कीको नाम सुनेपछि जो कोही हच्किन्थे र भन्थे, ‘बाफ रे, लोकमान !’ पैसा फाइलमा राखेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्न बानी परेका मालपोत र नापीका कर्मचारीहरु अख्तियार भनेपछि थुरथुर हुन्थे । यसरी भ्रष्टचारी…
[ Jan 24, 2017 ] गुणस्तरहीन बन्दै दिक्तेल–हलेसी सडक
खोटाङ। कालोपत्रे थालिएको दिक्तेल–हलेसी सडक गुणस्तरहीन बन्ने भएको छ । कालोपत्र गर्नुअघि सडकमा बिच्छ्याइएको रोडा÷ढुङ्गा कमसल भएका कारण सडक गुणस्तरहीन बन्ने भएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने दिक्तेल–हलेसी सडकमा बिच्छ्याइएको ग्राभेल (रोडा÷ढुङ्गा) अहिले नै फुटेर धुलो…
[ Jan 24, 2017 ] तीन करोडका कारण तीन सांसदको मारामारः राज्यमन्त्री समेत पीडित !
चौतारा । निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम मार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई विकासका लागि आउने ३ करोड रुपियाँ एकलौटी रुपमा बाँडफाँड गरेपछि यतिबेला सिन्धुपालचोक जिल्लाका तीन सांसदहरुको मारमार सुरु भएको छ । क्षेत्र नम्बर ३ का एमाले सांसद शेरबहादुर…
[ Jan 24, 2017 ] केरुङ्गे खोलाको गिटीमा देउवाको नजर, नवलपरासीका एलडीओ सरुवामा यसरी भयो हस्तक्षेप
काठमाडौं । ठेकेदारहरुको स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि नवलपरासी जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अग्रसरता खुलेको छ । देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई धम्क्याएर एलडीओ जीवलाल भुसालको सरुवा गराएको रहस्य खुलेको छ । मंसिरको अन्तिम साता नवलपरासीको…
[ Jan 24, 2017 ] यस्तो छ ‘नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट’को नालीबेली
काठमाडौं । नेपालले अहिले आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने विषय निकै चर्चामा छ । सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले आफू पुग्ने सबै कार्याक्रममा स्याटेलाइट राख्न लागिएको चर्चा गर्न छुटाउँदैनन् । तर, नेपालले कसरी स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पुर्‍याउँदैछ ? भन्ने आमचासो छ । आफ्नै…
[ Jan 24, 2017 ] मुख्यसचिव सोमलाल भन्छन्- चौतारीमा पाती उखेलेको सबैले देख्छन्, काम गरेको कसैले देख्दैनन्
काठमाडौं । संविधान जारी भएसँगै संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट एकैचोटि तयारी तीव्र पारेको छ । र, यो काममा अहोरात्र खटिएका छन् नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरिरहेको होमवर्क…
[ Jan 24, 2017 ] एकैपटक चालिस जिल्लामा ठूला खानेपानी आयोजना
काठमाडौं । खानेपानी तथा ढल निकास विभागले उच्च तथा मध्यस्तरीय खानेपानी आयोजना ४० जिल्लामा सञ्चालन गर्न लागेको छ । सबै जनतालाई शुद्ध खानेपानी पुर्याउने योजनाका साथ विभागले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । खानेपानी तथा…
[ Jan 24, 2017 ] डाँडामा मन्दिर देख्नासाथ केबलकार बनाउन प्रस्ताव !
काठमाडौं । मनकामनामा केबलकार गुड्न थालेको दुई दशकपछि काठमाडौंको चद्रागिरिमा पनि केबलकार सुरु भयो । तर, अबको केही वर्षमा चर्चित मन्दिरदेखि पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा समेत केबलकार हुने देखिएको छ । पाथीभरा, स्वर्गद्वारी, मक्तिनाथ मन्दिरदेखि सारङकोट डाँडामा समेत…
[ Jan 24, 2017 ] चिनेको सुन तस्कर समाउन नसक्ने डीआइजीले कसरी चलाउलान् आइजीपी ?
काठमाडौं । पुस २१ गते त्रिभुवन विमानस्थलमा ३४ किलो सुनसहित ‘भरिया’हरु समातिँदा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) प्रमुख डीआइजी नवराज सिलवाल निकै बहादुरीपूर्वक पत्रकारहरुसँग प्रस्तुत भए । डीआइजीबाट एकैचोटि आइजीपीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाउन लागेका सिलवालका लागि यो ‘एक्शन’ निकै ठूलो ‘प्लस प्वाइन्ट’ हुन सक्ने भएकाले उनी…
[ Jan 24, 2017 ] ओबामा विदेश नीतिलाई ट्रम्पको पहिलो झड्का, टीपीपीबाट बाहिर निस्कने आदेशमा हस्ताक्षर
काठमाडाैं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक व्यापार सम्झौता ‘ट्रान्स प्यासिफिक पार्टरशिप’ (टीपीपी) बाट बाहिर हुने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसो गरेर उनले आफ्नो चुनावी अभियानमा गरेका बाचाहरु मध्ये एक पुरा गरेका छन् । …
[ Jan 24, 2017 ] संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा नगर्न सरकारलाई मधेसी मोर्चाको दबाव
काठमाडााैं । मधेसी मोर्चाले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई संविधान संशोधन नगरी चुनाव घोषणा नगर्न दबाव दिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार अपराहृन ४ बजे कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोचर्ँको बैठक बोलाएका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरुले छिट्टै स्थानीय चुनावको मिति घोषणा…
[ Jan 24, 2017 ] भारतीय पक्षद्वारा दशगजा मिचेर धमाधम गुम्बा निर्माण
पशुपतीनगर (इलाम) l भारतीय पक्षले इलामको पशुपतीनगर-४ फाटक र भारतको राङवाङ ग्रामपञ्चायतबीच रहेको दशगजा क्षेत्रमा गुम्बा मर्मत भन्दै धमाधम नयाँ पक्की गुम्बा बनाउन थालेपछि नेपाल सरकारले काम रोक्न गरेको आग्रहलाई भारतीय पक्षले बेवास्ता गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुंगानाले गुम्बा निर्माणको खबर आएपछि भारतीय…
‹ First Previous 404 405 406 407 408 Older Last ›